Ngoncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam yiBeatles - Izinto Zobugcisa
Ngoncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam yiBeatles
I-albhamu yarekhodwa ngokungathi yi-Sgt. Ipepper yayiliqela lokwenyani. Ivula nge ingoma yomxholo , emva koko uqhekeze uthi 'Ngoncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam.' Umculi weBeatles uRingo Starr wacula phambili, waziswa njengo-'Billy Shears, 'igama elikhethiweyo kuba livakala lilungile kwaye lidlala umbono wokuba iqela likwisimo.
Ingoma ayikhange ikhutshwe njengeyodwa, kodwa yaba yenye yeendlela ezihlala zihlala kwiqela. Kuba akukho khefu kwi-albhamu phakathi kokuphela kwengoma yesihloko (kunye 'nokwaziswa kukaBilly Shears') kunye nokuqala kwale ngoma, izikhululo zikanomathotholo zanyanzeliswa ukuba zidlale kunye okanye zidlale ngokungavulekanga.
Le yayiyenye yeengoma zokugqibela uJohn Lennon noPaul McCartney bahlala phantsi babhala kunye ngentsebenziswano yokwenyani. Babesendlwini kaPawulos bexakanisekile ngepiyano.
Isihloko esisebenzayo yayingu 'Bad Finger Boogie,' igama elinguLennon weza nalo kuba wayenzakele ngomnwe. AmaBeatles asebenzise igama xa betyikitya iqela elibizwa ngokuba yi-Iveys kwilebula yabo, iApple Records, ngo-1968 bababiza ngokuba yiBadfinger.
Ukuduma kwasekuqaleni kwathathwa kwikhonsathi yeBeatles kwiHollywood Bowl. IiBeatles zayeka ukhenketho ngexesha lokurekhodwa.
Oku kwafika # 1 kwi-chart yase-UK kathathu: okokuqala nguJoe Cocker ngo-1968, kwakhona ngo-Wet Wet wet ngo-1988 kwaye ekugqibeleni ngu-Sam noMark ngo-2004.
UJohn Lennon ubanga ukuba oku bekungekho malunga neziyobisi, kodwa abantu abaninzi abakhange bamkholelwe, kubandakanya nosekela mongameli wase-US u-Spiro Agnew, owakhe waxelela isihlwele ukuba le ngoma 'Yimbeko kumandla eziyobisi ezingekho mthethweni.' Uthe imigca, 'Ndidlula ngoncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam, ndinyuka ngoncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam,' 'Ngaba ngumculo omnandi, kodwa kwade kwalatha kum, andizange ndiqonde ukuba' Abahlobo 'babethengisa iziyobisi!'
UMike-Mountlake Terrace, WA. I-USA
Umgca wokuqala wawungowokuqala 'Unokwenza ntoni ukuba bendicula ngaphandle kwetune? Ungaphakama undigibisele iitumato? ' URingo wayengafuni ukuyicula, esoyika ukuba ukuba bangaze bayenze bukhoma uya kudutyulwa ngeetumato.
IiBeatles zigqibile ukurekhoda oku ngobusuku abadubule ikhuselo Sgt. Ipelepele icwecwe. Oku kwaqhubeka 'neConcept' yealbhamu, kodwa de kwavela kwakhona 'Sgt. Ibhendi yeBlack Pepper's Lonely Hearts Club 'ekugqibeleni, umxholo webhendi eyintsomi uphela ngale nto.
Iminyaka elishumi elinambini emva kweSgt. Iqela leqela lePepper's Lonely Hearts Club Band 'kwaye' ngoncedo oluncinci oluvela kubahlobo bam 'bavele kwi Sgt. Ipelepele icwecwe, bakhululwa kunye njengeengoma ezimbini medley kwaye bafikelela eUS # 71 nase UK # 63.
UJerro - iNew Alexandria, PA
Xa uRingo Starr wanyulwa kwiDwala nakwiRoll Hall of Fame ngo-2015, wenza le ngoma kunye nabathathi-nxaxheba abaninzi ngokuhlwa, kubandakanya uJoan Jett, uMiley Cyrus, uDave Grohl, uStevie Wonder noPaul McCartney.
Isimbozo sikaJoe Cocker sango-1968 sasetyenziswa njengengoma yengoma yee-80s / '90s series TV Iminyaka Emangalisayo , edlala uFred Savage.
URichie Havens, umlingisi wokuqala eWoodstock, ubandakanye le ngoma kwiseti yakhe kumnyhadala.
Iingoma zeUptown Funk nguMark Ronson
Isinye kwisigidi ngeziGuns N 'Roses
Iingoma zeGooey yiGlass yezilwanyana
Iingoma zeMigraine ngamashumi amabini ananye abaqhubi beenqwelo moya
Iingoma zeeIqithi kwiMisinga nguKenny Rogers kunye noDolly Parton
Iingoma zeLivin 'La Vida Loca nguRicky Martin
Ukuvuyela kukaRappa yiSuarhill Gang
Iingoma zeGrenade nguBruno Mars
Iingoma zomnye umntu uluma uthuli nguKumkanikazi
Lyrics for Xa Ndiyekelelwa Nguwe by Royal Blood
Iingoma zeNdoda yoNyaka nguScHoolboy Q
Iingoma zeSuper Bass nguNicki Minaj
encinci embindini kodwa wabuyela kakhulu
kuye intsimbi ibiza intsimbi intsingiselo
ed sheeran - ndibona umlilo
ngubani kwaba balandelayo onike imvelaphi yezwi lokubandezeleka 'kwemali engenanto'?
Amagama anokundithoba amazwi